ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: ဘလော့ခရီးသည်
JUNE 2012 ရက်တွင် သည်ဆိုဒ်လေးကို တည်ထောင်ပါသည်။ သည်ဆိုဒ်လေးတွင် ရှိသောနည်းပညာများအား အခြားသော နည်းပညာရှင်းများထံမှ လေ့လာသင်ယူကာ ကြိုးစားမျှဝေနေပါတယ်.. ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်ကို ၀င်လာသူအပေါင်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ လိုအပ်သလို ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါကြောင်း.... တုန့်ပြန်မှု အနေနဲ့ မန်ဘာလေးဝင် အားပေးစကားလေး ချန်ခဲ့ရင် ကျေနပ်လှပါပြီဗျာ...
နောက်ဆုံးတင်သမျှ Slider Post လေးလုပ်နည်း( ရှယ်နော် )
8:44:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
Welcome Clock ဆိုတဲ့ နာရီအလန်းလေး
ဘလော့မှာ လှပသော Vertical Navigation Menu လုပ်နည်း
အခမဲ့ converter ဆိုဒ်လေးပါ
USB Stick / DVD နှင် Network ကို သော့ခတ်ဖို့Usb block 1.5 full
6:30:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ Crack ဖိုင်ပါတယ် အင်စတောလုပ်ပြီး Crack လုပ်ရင် full သုံးရပြီ ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ အရင် 1.3 နှင့်အတူတူပဲ ။ အခု 1.5 တွေ့ လို့တင်လိုက် တာပါ အသုံးပြုပုံကတော့ အရင်ဟာနဲ့ အတူတူပါပဲ ။ကိုယ့်ကွန်ပျုတာကို သူများ လာပြီး စတစ်ထိုးမရဘူး ။ DVD နဲ့Net work ပိတ်ထားနိုင်မယ် ။ မတတ်သာ၍ သူများလာသုံးရင်လည်း စတစ်ထိုးပြီး ကူးချင်တာကူးလို့ မရဘူးထိုးကြည့်တာနဲ...
အင်တာနက်မရှိသည့်အချိန်တွင် စမ်းသပ်အဆင့်Offline Gmail ...
ဘလော့Header ပုံလုပ်ရန်အတ္ဂက် Xheader maker ဆော့ဝဲလ်
ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းကဒ် နဲ့လက်ဆောင်ပိုစ်ကတ် လှလှလေး
6:04:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
အခုလ ၈ရက်နေ့ က ဟန်ဂျီအင်းမွေးနေ့ မှာ လုပ်ပေးထားတာပါ ပြက္ခဒိန် ဒီဇိုင်းများကြီးပဲ စာတွေကတော့ Power Point နဲ့ ယူရေးလိုက်တာပါ တိုက်ဆိုင်သူရှိက ကြိတ်မချိုးမဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး နီးကပ်လာပြီဆိုတော့ လက်ဆောင်ကတ်လေးတွေလုပ်နိုင်ကြစေဖို့ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အင်စတောလုပ်စရာ မလိုတဲ့ PTB လေးပါ တန်းသုံးရုံပဲ / ဒီဇိုင်းတွေလည်း အများကြီးပါသလို ပြက္ခဒိန်...
USB Stick / DVD နှင် Network ကို သော့ခတ်ဖို့Usb block 1.5 ...
ဖိတ်စာ လိပ်စာ ဒီဇိုင်းကတ်တွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Business Card
6:01:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ လိပ်စာကတ် ဖိတ်စာကတ် ဒီဇိုင်းကတ် လက်ဆောင်ကတ် တစ်ခုခု ပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်စေမယ့် ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကလည်းအရမ်းလွယ်ပါတယ် ဒီဇိုင်းတွေကလည်းအများကြီး ပါ၏ နမူနာစမ်းလုပ်ပြထားပါတယ် ။ ဒီဇိုင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကောင်းရင်ကောင်းသလို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။ လိပ်စာကဒ် ပြုလုပ်ချင်သူတွေ ...
gtalk အကောင့်များသုံးပြီး ကျန်မနေခဲ့စေရန်
5:42:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
မင်္ဂလာပါ ဘလော့ခရီးသည်ကိုလာရောက်အားပေးကြသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ဗျားး ခုတင်မှာလေးကတော့ C-Box ကတောင်းဆိုမှုလေးဖြစ်သလို ဘလော့သမားတွေအတွက် မသိမဖြစ် သိထားရမည့် အကြောင်းရာလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးး ဘလော့တွေမှာ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် template တွေ ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေ နဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ သည်နည်းလမ်းလေးကို သိကိုထားမှ ဖြစ်မှာမို့ပါ...ဒါကြောင့် တောင်းဆိုမှု အရရော..သိသင့်တယ်ထင်တာမို့...
Blogs For Rainbow Link တဲ့နော်...
gmail အကောင့်ဖွင့်နည်း နှင့် lock ကျသူများအတွက်
မိမိဘလော့ကို Summit ပုံမှန် လုပ်ကြပါ
Never-Home-Older တွေကို ပုံလေးနဲ့ အစားထိုးနည်း(မျှဝေခြင်း)
CO.CC မှာ မုရင်း blogspot.com ပြန်ချိန်းနည်း
3:46:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
မင်္ဂလာပါဗျာ..ခုတင်တဲံပို့စ်လေးကေတာ့ C-Box ကနေတောင်းဆိုထားတာလေးပါ... ဘလော့မှာ ဒိုမိန်း co.cc နဲ့လုပ်ထားသူများအတွက်လဲ အကျိုးရှိပါတယ်.. မသိသေးသူများပေါ့နော်... ခုတလော c0.cc တွေက အကုန်နီးပါး ပျက်နေပါပြီ... သည်တော့ မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်ဘလော့စပေါ့ ကိုဘဲ ပြန်ချိန်းဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်... အဲအတွက် ညီလေးတစ်ယောက်က တောင်းဆိုထားတာပါ။ စိုင်းတိုင်းအွန်: မင်္ဂလာ ပါ ကျွန်တော် ပလောဂါ မှာ co.cc...
မြန်မာငွေကြေးအခြေပြလေး ဘေလာ့မှာ ထည့်မယ်
ဘလော့မှာrelated posts widget လေးထည့်ကြမယ်.
Youtube တွင် အလွယ်တကူ Download ယူရန်
9:21:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
ဒီနေ့ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာကိုအစဉ်မြဲသုံးနေကြတဲ့ရွှေညီအကိုအားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားစွာနဲ့ ကွန်ပျူတာ keyboardတစ်ခုလုံးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သိပြီးကြသူတွေလည်းများမယ်ထင်ပါတယ်၊မသိကြသေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်တာ လေးတွေရှိခဲ့ရင်အဆင်ပြေအောင်ပါ။ရေးမှားပြောမှားတာတွေရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်နားလည်ပေး လိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်၊မြန်မာစာမရေးဖြင့်တာလည်းနှစ်ကတောတောကြာသွားပါပြီ။ မြန်မာစာနဲ့တော့ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူးစာလုံးတွေကရှင်းရှင်းလေးတွေဆိုတော့၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊ ဘာသာလဲ...
Blogger template - Float..few more versions
G Talk မှာသိသင်.တာလေးတွေ
9:20:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
မိမိရဲ့ဘလော့ပိုမိုပြီးလှပစေရန်(Header)ပေါ်မှာ Add Page Elementထည့်နည်းလေးပါ၊မသိကြသေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ လေးလည်းလေးစာပါတယ်၊ မိမိဘလော့လေးလှချင်ရင်တော့နည်းနည်းအပင်ပန်းခံတာပေါ့နော်..ဟီး.... Add Page Elements ကို Blog Header မှာဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုရင် ဘလော့ ခေါင်းစီးပုံတွေလည်း အလွယ်တကူထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်... တချို့ တက်ပလက်တွေက ခေါင်းစီး header ပုံတွေ ထည့်မရတာ ရှိပါတယ် ...
facebook စာမျက်နှာကို better facebook လုပ်ကြရအောင်။
ဖိုင်တွေ-ပုံတွေတင်ဖို့ Hosting ဆိုဒ်များ
ဘလော့မှာ Floating Bar လေးထည့်နည်း
Internet Connection ကို 300% ထိတင်ပေးမဲ့ Software
10:11:00 PM အောင်အောင်(မကစ) No comments
Net speeder v4.5 build 850 Internet Connection ကို 300% ထိတင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်.... အရင်ကလဲတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒေါင်းမရဘူးပြောနေလို့ နောက်ဆုံး Version ကိုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။ Easily optimize your internet connection by NetSpeeder Tweak Wizard· Fine tweak every TCP/IP parameter by NetSpeeder Fine Tune· The internet connection...
ဘလော့မှာ Error 400 တက်တာကို ဖြေရှင်းမယ်
သိသင့်သော Shortcuts လေးများ
အခမဲ့ Button,Menu,Banner,Texts,Flash တွေသုံးနိုင်တယ်
မန်ဘာဝင်ခြင်းဖြင့် ကျော်ခွ ခြင်းမှ ကင်းစေရန်
9:51:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
အားလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ... ခုတင်မဲ့ ပို့စ်လေးကတော့.. တမူထူးခြားတယ်လို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်... ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သည်နည်းလေးက မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေတို့အတွက် ပိ်ုပြီးအဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ်... မြန်မာပြည်မှာ ဆို blogspot.com တွေဝင်ရတာ တခါတခါမှာ ကျော်ရ ခွရနဲ့... အာရုံနောက်စေပါတယ်...ဒါလေးကတော့.. ကျော်ခွဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိလို့ပါ... မြန်မာပြည်က မဟုတ်လေတော့ အတိကျပြောဖို့ ခက်ပါတယ်......
မိမိကွန်ပျူတာ memory သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြမယ်..
8:28:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
ရှောင်ထား ရှားထားကြပေတော့ ….လာပြီနော် ………… ၀ိုင်းရိုက်ကြတော့မလားတော့ မသိဘူး ….သတိတော့ ထားမှ … သိတာလေး ပြောပြတာပါ ခင်ဗျာ ….ကိုယ်ကလုပ်လို့ကောင်းပေမယ့် …. ကိုယ့်ကို ပြန်အဘတ်မခံရအောင်ပေါ့ …( ကောင်းမလေးက ) ဒီလိုဗျ … သူက Invisable နဲ့ Chat နေလား မ Chat နေလားဆိုတာကို သိအောင် …. သူ Online မှာတကယ်ရှိနေလား မရှိနေလားဆိုတာကို စမ်းဖို့အတွက် … ကျွန်တော်တို့ Gtalk ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ….ပြီးတဲ့အခါမှာ...
virus ရှိမရှိ စစ်မယ် သတ်မယ်
Marquee code များနဲ့ ပျော်စရာ
Search Box လေးအလွယ်ထည့်နည်း
ပို့စ်တွေ့ရဲ့ နေ့စွဲလေးတွေမှာ ပြက္ခဒိန်လေး ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ
Popular Post လှလှလေးဖန်တီးကြရအောင်
8:27:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
သည်နည်းပညာလေးကတော့ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်ဆိုဒ်တစ်ခုကနေ တွေ့ရှိကူးယူ ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပထမဆုံး ၀န်ခံလိုက်ပါရစေ.. နှစ်သက်သဘောကျလို့ ခုလို ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပါ.. သည်နည်းလေးကို စမ်းသတ်ကြည့်လိုက်ပါ..အရမ်းသေသပ်လှပတဲ့ ပေါ်ပြူလာပို့စ်လေးတွေကို မိမိတို့ဘလော့မှာ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်... လက်တွေ့စမ်းသတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်.... နည်းလမ်းလေးနဲ့...
Html ၀င်နည်းလေးပါ ( ဘလော့ကာအသစ်များအတွက်ပါ)
7:21:00 AM အောင်အောင်(မကစ) No comments
သည်ပို့စ်လေးကတော့ ကျွန်တော် GTALK မှာ ညီလေး တယောက် အကူညီတောင်းဆိုထားလို့... ခုလို တင်ပေးလိုက်ရတာပါ.. အသစ်စလုပ်ဘူးတာဆိုတော့ Html အကြောင်းနားလည်ဖို့ ခက်ပါတယ်.. အရေးကြီးတာက ဘလော့တစ်ခုမှာ html ကိုကလိတတ်မှ ပိုအဆင်ပြေမှာလေ... ဒါမှ မိမိတို့ဘလော့လေး စိတ်တိုင်းကျ လန်းသွားမှာပေါ့နော်..ကဲ ပြောနေကြာတယ်.. ခုတင်မဲ့ နည်းလေးကတော့ နည်းပညာတွေ တော်တော်များများဟာ Blogs Html ကိုဝင်ထည့်ရတာတွေ...
♥ ဝါသနာအရ Blogs နည်းပညာလေးတွေ လေ့လာနေဆဲပါ။ ကျွန်တော့်မြင်ဆရာ ဆရာ Kp-3 အားလေးစားသောအားဖြင့် နည်းပညာများကို စုဆောင်းကာ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်~~ ♪ ဘလော့ပညာများအား ပါဝင်ရေးသားလိုပါက ဆန္ဒရှိပါက ဆက်သွယ်မယ် ဆိုရင် ♥ ♥ ♥ aungsan96@gmail.com မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ♪♪♪ ♥ ကျနော့်ရဲ့ ဆိုဒ်လေးများးးးး www.ledimyethar.com~~ www.depelyin.co.cc - www.aungkyaw.com~~ တို့ကိုလည်း သလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။- မျှဝေသူ++အောင်အောင်(မကစ)++
Blogger Comment (13) Blogger Hack (21) Blogger Template (26) Blogger Tips (52) Blogger Widget (120) Blogs Html (51) Blogs Post (44) Blogs Tab Menu (24) C-Box (5) Computer ဆိုင်ရာ (1) Contact Me (1) Desing Card (2) Facebook (22) General Note (35) Gmail-Gtalk (44) New Blogs (4) Read More (6) Search Box (4) Software For Blogs (6) တင်ပြီးသမျှ (1)
Write Down Ur Email
သင့်အီးမေးကို ထားခဲ့တာနဲ့ တင်သမျှ
UpIT.Com | mediafire | Minus
ဇော်ဂျီ 32-bit ဒေါင်းရန်
ဇော်ဂျီ 64-bit ဒေါင်းရန်
FB မှာ ဖတ်နိုင်ဖို့ LIKE ခဲ့ပါရန်
Microsoft Office 2013 Serial Key Update (21 Nov 2012)
စက်ဘိန်းပြိုင်ပွဲဂိမ်း အလန်း for Android 79MB
Connectify Hotspot PRO v3.7.1.25486 (Latest Version)
No Mouse Selection, Right Click Disable is impossible
HiDownload Platinum 8.0
How To Add Customize Popular Posts Widget With CSS3 To Blogger
Facebook Background Layout ထည့်နည်း
App2SD Android Apk Software
VZO Myanmar Version လေးလာပြီနော် သိပ်မိုက်ဗျာ
Welcome ~ လတ်တလော ဖိတ်ကြားထားသူများ
Main Page - pro phyo @ mixxt
အောင်အောင်(မကစ)ဟုတ်ကဲ့ဗျာ..ကျွန်တော် အမြန်ဆုံး အလားတူေ…
jokerအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you so mu…
Anonymousအကို ဒေါင်းလော့ link က သေနေပြီထင်တယ် ကျေ…
အောင်အောင်(မကစ)ဟုတ်ကဲ့ ကုဒ်တွေက တက်ပလက်အလိုက် မတူညီကြပါ…
tayzar aungအခုလို computer နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဖြေရှင်းနည်…
၀သုန်ကဲကြွေးပြီဗျာ အားဆေးCode ကရှာလို့မတွေ့ဘူ…
အပါတ်စဉ်တင်သမျှပို့စ်များ 11/18 - 11/25 (8) 11/11 - 11/18 (25) 11/04 - 11/11 (32) 10/28 - 11/04 (39) 10/21 - 10/28 (36) 10/14 - 10/21 (13) 10/07 - 10/14 (36) 09/30 - 10/07 (33) 09/23 - 09/30 (19) 09/16 - 09/23 (78) 09/09 - 09/16 (44) 09/02 - 09/09 (33)
Copyright © 2011 ဘလော့ခရီးသည် | မူပိုင်++အောင်အောင်(မကစ)
Design by အောင်အောင်(မကစ) | သည်ဘလော့လေးကိုဘလော့ကာဝါသနာရှင်များအတွက် - ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် | သိသမျှပညာများအား လေ့လာ မျှဝေပါသည်။**June2012**
Posted by naihan at 07:36